Warbixintii ugu dambeysey ee coronavirus-ta Australia. Victoria oo laga diiwaan geliyey 1838 keysas cusub ah. Dadka deggan xuduudaha Victoria la leedahay gobollada kale oo loo oggolaadey inu isu gudbi karaan.
Victoria ayaa bulshooyinka dib ugu bilowday dadka xuduudaha deggani isu gudbi karaan
NSW ayaa dadka oo dhan ku boorriey inay qabatimaan dhaqan ammaan ah oo COVID-19 ah
In ka badan boqolkiiba 68 reer Camberra ayaa si buuxda isu tallaalay
Queensland iyo South Australia ayaa khafiifinaya xannibaadaha.
Victoraia ayaadiiwaangelisay 1,838 oo keys oo cusub oo gudaha laga helay iyo shan dhimasho ah.
Dhowr goobood oo dowlad-hoose-deegaan ah ayaa lagu daaray dadka xadadka ee isu gudbi kara, oo ay ku jiraan Benalla, Greater Bendigo, Buloke Shire, Loddon, Yarriambiack, Hay, Edward River, Lockhart, Murrumbidgee, Wagga Wagga.
Dadka goobahaa deggan y 14 -kii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa mid ka mid ah goobahaasi ayaa kaga bixi kara Victoria oggolaansho la'aan.
Halkan ka raadi goob tallaal oo kuu dhow
NSW ayaa laga diiwaangelisay 64adood oo cusub oo gudaha laga helay iyo 11 dhimasho ah, taasoo wadarta guud ee dhimashada la xiriirta COVID ee hadda dillaacay gaadhsiisey 414.
Calaamadaha fayrasta ayaa laga helay tijaabooyin laga qaaday bullaacadaha Wee Waa ee gobolka Hunter New England iyo Quirindi iyo Brewarrina oo ku taalla NSW.
Madaxa Sarkaalka Caafimaadka, Dr Kerry Chan, ayaa ku boorinaysa qof walbaa, inuu sii wado xirashada waji-xidhka, isticmaalka QR Code-ka, kala fogaanshaha bulshadaa, iyo, ugu muhiimsanaanna, uu is g go'doomiyo isna baadho haddii uu isku arko calaamadaha COVIC-19.
Guji halkansi aad u samaysato ballantaada tallaalka maanta
ACT ayaa manta laga diiwaangeliyay 40 kikeys oo cusub oo gudaha lagu kala qaaday.
Hadda waxaa isbitaalka ku jira 16 bukaan oo COVID qaba, oo ay ku jiraan lix ku sugan daryeel degdeg ah iyo shan u in laga caawiyo neef-qaadashada.
Dhulku wuxuu diiwaangeliyay 40 kiis oo maxalli ah.
Hadda waxaa isbitaalka ku jira 16 bukaan oo COVID ah, oo ay ku jiraan lix ku jira daryeel degdeg ah iyo shan u baahan hawo.
lGuji halkan is aad u samaysato ballanta tallaalka COVID-19 maanta.
Goobaha dawladda hoose ee Brisbane, Logan, Gold Coast, Moreton Bay, Townsville (oo ay ku jirto Magnetic Island), iyo Palm Island waxay dib ugula soo biiri doonaan heerka xayiraadaha Stage 3 inta kale ee Queensland, laga bilaabo 4pm maanta, Jimce 8 Oktoobar
Koonfur barida South Australia, ayaa dib ugu soo noqonaya heer-ka xannibaadda ee gobolka intiisa kale. Kuwaas oo hadda ku jira heerka 1aad ee xannibaadaha
Macluumaad ku saabsan Tallaalka COVID-19 LUQADDAADA.·